MSB: Sweden waa u diyaar howlaha dab demiska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Anneli Bergholm Söder, agaasimaha laanta howlgalka ee hayadda MSB. sawir: Jonas Ekströmer/TT
MSB: Sweden waa u diyaar howlaha dab demiska
La daabacay onsdag 24 april 2019 kl 16.55
Dayuurrado ka badan oo ah kuwa biyaha ku rusheeya dabka ka kaca keeymaha iyo maqaasiinno ey ka buuxaan qalabka loo isticmaalo dab deminta oo ku yaala bannaanada ayay filaysaa hayadda u diyaargarowga iyo badbaadinta bulshada inay Sweden uga diyaargarow wanaagsan tahay sannadka, kolka loo barbar dhigo sannadkii ka horreeyay.
Sweden waa ay u diyaarsan tahay maanta, iyadoo dhanka kale diyaargarowyo loo galey kuleeylaha foodda innagu soo haya, sida ay sheegtay Anneli Bergholm Söder, ahna madaxa laanta howgalka ee hayadda magaceeda loo soo gaabiyo MSB.
-Waxaannu xoojinney awoodayada qalabka dab deminta, qaasatan kolka laga hadleyo dayuurradaha qumaatiga u kaca. Waxaannu qandaraas ku kala saxiixanney illaa hadda tobaneeyo, laakiin waxaannu gaarsiin karnaa illaa iyo soddomeeyo, sida ay sheegtay Anneli Bergholm Söder.
Hayadda MSB ayaa kolka laga yimaado kor u qaadista tirada dayuurrada qumaatiga u kaca waxay sidoo kale xoogga saari doontaa aqoon kororsiga la xiriira adkeeynta sidii habka ugu wanaagsan looga faa’iideeysan lahaa dayuurradaha qumaatiga u kaca. Waa awood dawladeed oo aan horey u jirin. Hayadda ayaa sidoo kale sheegtay in dayuurraduhu ku diyaargaroobi karaan muddo 90 daqiiqadood ah.
Hayaddu waxay sidoo kale xoojin doontaa awooddeeda taageerista ee laamaha ku shaqada leh la dagaalanka dabka wada shaqeeyn iyo hoggaaminba.